Uyilo lweBlackmagic Yazisa ngeKhamera eNtsha yeBlackmagic Pocket Cinema 6K Pro | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » Uyilo lweBlackmagic Yazisa ngeKhamera eNtsha yeBlackmagic Pocket Cinema 6K Pro
Imodeli yePocket Cinema yekhamera ye-6K ephambili eyakhelwe ngaphakathi kwiifilitha ze-ND, isikrini se-HDR esinokuhlengahlengiswa, isayensi yemibala yeGen 5, ibhetri enkulu kunye nesibonisi sokukhetha!
I-Fremont, CA, e-USA-ngolwesiThathu, ngoFebruwari 17, 2021 - Blackmagic Design namhlanje ibhengeze i-Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, imodeli entsha enamandla ngakumbi ebandakanya amanqaku kwifilimu ephezulu yedijithali. Le modeli intsha ibandakanya ukukhanya okungaphezulu kwe-1,500 nit nit adjustable screen touch screen, eyakhelwe kwiifilitha ze-ND, ibhetri enkulu, kunye nenkxaso yesikhupheli sokujonga ngombane. Le modeli ikwabandakanya isizukulwane esitsha sombala we-5 yesayensi, isivamvo somfanekiso weSuper 35 HDR kunye nokuma okungu-13 koluhlu olunamandla, i-ISO yemveli engama-25,600 kunye nentaba eyaziwayo yeelensi ze-EF.
I-Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro iyafumaneka kwangoko ukusuka Blackmagic Design abathengisi behlabathi jikelele kwi-US $ 2,495.
Uyilo oluhle lweKhamera yeBlackmagic Pocket Cinema ipakisha inani elothusayo lokuphela kweempawu zedigital yedijithali kuyilo olwenziwe ngesandla, oluphathwayo. Yenziwe ngokudityaniswa kwekhabhoni yefayibha ye-polycarbonate, ikhamera inesandla esinezixhobo ezininzi kunye nolawulo lokurekhoda, i-ISO, i-WB kunye ne-shutter angle ekunene. Ngenxa yokuba yikhamera yefilimu yedijithali ehambele phambili, inzwa yenzelwe ukunciphisa ingxolo eshushu evumela ukucoca izithunzi kunye ne-ISO ephezulu. Kwaye i-intshi enkulu ye-5 intshi ye-LCD yenza ukuba kugxilwe ngokugqibeleleyo kwi-4K kunye ne-6K izigqibo.
Ifaka inzwa enkulu ye-6144 x 3456 Super 35 kunye ne-EF lens mount, i-Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ivumela abathengi basebenzise iilensi ezinkulu ze-EF ukwenza imifanekiso ye-cinematic enobunzulu bentsimi, ivumela imvelaphi yokuyila enobuchwephesha kunye neziphumo ezihle ze-bokeh.
Ikhamera yeBlackmagic Pocket Cinema Ikhamera ye-6K Pro ibandakanya izinto ezongezelelweyo ezakhiweyo njengezihluzo ze-2, 4 kunye ne-6 zokumisa i-ND, i-HDR eguqukayo ye-HDR ye-LCD enezinto eziqaqambileyo ze-1500 ezilungele ukusetyenziswa kwilanga eliqaqambileyo. Ikwabandakanya ukufakelwa kwee-XLR ezimbini zomsindo kunye nebhetri enkulu yesimbo se-NP-F570.
Nokuba abasebenzisi badubula kwilanga elikhanyayo okanye phantse akukho kukhanya konke konke, ii-13 zokumisa zoluhlu olunamandla kunye ne-ISO yemveli emibini ukuya kuthi ga kuma-25,600 zibonelela ngemifanekiso yengxolo ephantsi kuzo zonke iimeko zokukhanyisa. Kwaye iimodeli ze-6K zibonisa inzwa enkulu yeSuper 35 evumela ukudubula ngobunzulu bentsimi kunye neelensi ze-anamorphic. Zonke iimodeli zivumela abathengi badubule ukuya kwi-60 fps kwisisombululo esipheleleyo okanye kwi-fps ye-120 efestile. Isenzwa esimangalisayo esidityaniswe nesayensi yombala weBlackmagic sithetha ukuba abathengi bafumana itekhnoloji yokucinga efanayo njengeyona khamera yeefilimu yedijithali ibiza kakhulu.
Iimodeli ze-6K zibonisa intaba yeelensi ze-EF ukuze abathengi bakwazi ukusebenzisa abathengi beelensi abasele benazo kwezinye iikhamera ezinje ngeDSLR, URSA Mini Pro okanye nakwikhamera yokuqala yeBlackmagic Cinema. Abathengi banokusebenzisa iilensi zokufota ezikhoyo ezibonelela ngendlela emangalisayo yokuyila kunye nefuthe lomgangatho weelensi. Ukufakwa kwelensi esebenzayo kwenza abathengi bahlengahlengise ukugxila kunye ne-iris kumaqhosha kwikhamera okanye kwiscreen sokuchukumisa.
Ikhamera yeBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro inomgangatho ophezulu, iifilitha ze-IR ND ezivumela abaxhasi ukuba banciphise ngokukhawuleza inani lokukhanya elingena kwikhamera. Uyilo lokutshatisa imibala kunye nesayensi yemibala yekhamera, iifilitha ezi-2, 4 kunye ne-6 zokumisa zibonelela abathengi ngobubanzi obongezelelweyo nangaphantsi kokukhanya okungqwabalala. Iifilitha ze-IR ziyilelwe ukucoca zombini ii-optical kunye ne-IR zeevelengths ngokulinganayo, zisuse ungcoliseko lwe-IR lwemifanekiso. Amaqhosha okuvula abekwe ngasemva komzimba wekhamera, abekwe kwindawo elula yokufumana ubhontsi wabo ukusuka ekubambeni ngesandla. Useto lokucoca ulwelo lomsebenzisi unokuboniswa njengenombolo ye-ND, ukunciphisa ukunciphisa okanye iqhezu kwiLCD.
Iikhamera zePocket Cinema zibonisa ii-ISO ezimbini zemveli ukuya kuthi ga kuma-25,600, oko kuthetha ukuba zilungiselelwe ukunciphisa ukutya okuziinkozo okanye ingxolo kwimifanekiso, ngelixa zigcina uluhlu olupheleleyo lwenzwa. I-ISO yemveli engama-400 ilungele izigcawu ezinesibane esisetiweyo. Inzuzo isetwa ngokuzenzekelayo njengoko abathengi behlengahlengisa useto lwe-ISO, ke kulula ukubamba imifanekiso emihle xa abathengi bengenalo ixesha lokuseta izibane.
Iirekhodi zeKhamera yeBlackmagic Pocket Cinema zisebenzisa iifomathi ezivulekileyo zeefayile ukuze abathengi bangachithi ixesha lokuhambisa imithombo yeendaba. Ukurekhoda kusebenza kumzi mveliso we-10-bit Apple ProRes kwiifayile kuzo zonke iifomathi ukuya kuthi ga kwi-4K okanye kwi-12-bit ye-Blackmagic RAW kuzo zonke iifomathi ukuya kuthi ga kwi-6K. Abaphuhlisi banokukhuphela kwaye basebenzise i-Blackmagic RAW SDK yasimahla ukongeza inkxaso kwizicelo zabo. Eyona nto ifanelekileyo kuzo zonke iifayile zeendaba zisebenza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza kunye nabathengi banokufomatha amakhadi eendaba kunye neediski kwi-HFS + ye-Mac kunye ne-ExFAT yeWindows.
Ikhamera yeBlackmagic Pocket Cinema inescreen esikhulu esikhanyayo esi-5 intshi esenza ukuba kube lula kubathengi ukwenza ifreyimu kwaye bagxile ngokuchanekileyo. Kwizikrini ezigqubuthelweyo zibonisa ubume kunye neparamitha zokurekhoda, i-histogram, ukugxila kwizikhombisi, amanqanaba, izikhokelo zesakhelo nokunye okuninzi. Ikhamera yePocket Cinema 6K Pro LCD ngumboniso weHDR ohamba phambili onokuthi uthambekele phezulu nasezantsi ukuze kube lula ukujonga umpu wabo nakwesiphi na isikhundla. Kunye nemodeli ye-6K Pro yemiboniso ye-HDR ineempawu zokuqaqamba ezili-1500, ezilungele ukusetyenziswa kwilanga eliqaqambileyo.
Ifaka isizukulwana esifanayo 5 isayensi yemibala njengokuphela kwe-URSA Mini Pro 12K, iPocket Cinema Camera 6K Pro ihambisa inkqubela phambili enkulu ngakumbi kumgangatho womfanekiso ngokumangalisa, iithoni zolusu ezichanekileyo kunye nombala othembekileyo kuyo yonke into edutyuliweyo. Abathengi bafumana ijika le-gamma le-12-bit eliguqukayo eliyilelayo lokufaka idatha ngakumbi kwimibala kunye nezithunzi, kwimifanekiso ejongeka ngcono. Inzululwazi yemibala ikwajongana nobunzima bokulungiswa kwemifanekiso ye-Blackmagic RAW, ke umbala kunye noluhlu lweedatha ezinamandla ezivela kwisenzi zigcinwa ngemethadatha enokuthi abathengi bayisebenzise kwimveliso yeposi.
IPocket Cinema Camera 6K Pro ixhasa isibonisi sokukhetha ukwenza ngaphandle nangokubamba ngokuchanekileyo nangokulula. Abathengi bafumana umgangatho ophakamileyo odityanisiweyo we-1280 x 960 umbala we-OLED oboniswe kwisakhelo esikufutshane, i-diopter yeglasi ye-4 ngokuchaneka okungathethekiyo ngo -4 ukuya ku-4 kugqaliso kugqaliso. Eyakhelwe kwitshathi yokugxila kwidijithali iqinisekisa ukuba abathengi bafumana ukuseta okujolise kokujongwa kokujonga. Abathengi banokujonga ulwazi olunobume obubalulekileyo njengezikhokelo zesakhelo. IPocket Cinema Camera Pro EVF iqhagamshela ngokukhawuleza kwiBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ngesidibanisi esinye. I-viewfinder ine-70 degree swivel range kwaye iza neentlobo ezi-4 ezahlukeneyo zamehlo zombini asekhohlo nasekunene kwamehlo.
Iikhamera zeBlackmagic Pocket Cinema zibonisa igalelo elincinci le-XLR ngee-volts ezingama-48 zamandla e-phantom okudibanisa iimakrofoni zobuchwephesha ezinjenge-lapel mics kunye neebom. Imodeli ye-6K Pro inezinto ezi-2 ezincinci ze-XLR zonxibelelwano, ezivumela abathengi ukuba barekhode iithrekhi ezi-2 ezahlukeneyo zomsindo besebenzisa ii-2 mics, ngaphandle komxube wangaphandle. Ezi zine zakhiwe kwimics zinendawo ephantsi kakhulu yengxolo kwaye ziyothuka kwaye ziyamelana nomoya, zithatha isandi esikhulu kuyo nayiphi na indawo. Kukho igalelo le-3.5mm yeaudiyo yokuqhagamshela ii-microphone zekhamera yevidiyo, kunye nesithethi esakhelweyo sokudlala kunye ne-3.5mm yentloko eyintloko.
Ikhamera yeBlackmagic Pocket Cinema Camera 4K kunye ne-6K zisebenzisa iibhetri zohlobo lweLP-E6 ezisuswayo ngelixa imodeli ye-6K Pro isebenzisa iibhetri ezinkulu ze-NP-F570. Isinxibelelanisi samandla esitshixwayo seDC sisetyenzisiwe ukuze abathengi bangabi naxhala lokulahleka kwamandla ngexesha lokudubula. Kwaye kunye nepakethi ye-AC ebandakanyiweyo inokuyinika amandla ikhamera kwaye ihlawulise ibhetri ngaxeshanye. Nokuba i-USB-C yolwandiso lwezibuko inokuntywila ibhetri, ke abathengi banokusebenzisa iipakethi zebhetri eziphathwayo, iitshaja zefowuni eziphathwayo okanye iilaptops. Ukubamba ibhetri ngokuzithandela kuvumela abathengi ukuba bongeze ngakumbi iibhetri ukwandisa amandla ekhamera ukuze abathengi bakwazi ukugcina ukudubula imini yonke.
Zonke iimodeli zeKhamera yePocket Cinema zibandakanya ingxelo epheleleyo yeDaVinci Resolve Studio, nesoftware efanayo esetyenziswe kuyo hollywood yokudala iifilimu eziphezulu, iinkqubo zeTV ezikumabonwakude, iintengiso kunye nokunye. I-DaVinci Resolve inamaphepha amatsha okusika ngezixhobo zokuhlela ezikrelekrele kunye neempawu ezintsha ezenzelwe ukunceda abathengi ukuba bafumane ngokukhawuleza abathengi abafuna imifanekiso, bahlele kunye kwaye bayikhuphe ngokukhawuleza. Ukongeza kwiphepha elitsha elisikiweyo, abathengi bafumana ulungelelwaniso lobungcali lweDaVinci, ukulungiswa kombala okuqhubela phambili, iposti yeaudiyo kunye nezixhobo ezibonakalayo, zonke zikwisicelo esinye sesoftware.
"NgePocket Cinema Camera 6K Pro entsha, besifuna ukubandakanya zonke izinto eziphezulu ezivela kwiifilimu zedijithali kuyilo lwePocket Cinema Camera," utshilo uGrant Petty, Blackmagic Design CEO. Oku kuthetha ukuba ufumana isisombululo sefilimu esidijithali esigqibeleleyo kodwa ngazo zonke izinto eziphambili njengefilitha ezimangalisayo ze-ND, isibonisi sokuzikhethela kunye nescreen esikhanyayo se-HDR. Sicinga digital yethu umenzi wefilimu abathengi baya kuyithanda! ”
Iikhamera zeBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Iimpawu
Yenziwe kwisangqa sebhabhile yecarbon polycarbonate.
Inzwa ye-6144 x 3456 ine-13 yokumisa kunye ne-ISO yemveli emibini ukuya kwi-25,600.
Iyahambelana noluhlu olubanzi lweelensi ze-EF ezidumileyo.
Yakhelwe kwiifayile ze-2, 4 kunye ne-6 zokumisa i-ND.
Ukuya kwi-25,600 ISO yokusebenza okumangalisayo okuphantsi.
Iifomati ezivulekileyo zomgangatho ezihambelana nesoftware eyaziwayo.
Kubandakanya i-Blackmagic Generation 5 Science Science.
Ukhetho lweBlackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF.
Igalelo elincinci le-XLR lobuchwephesha elinamandla angama-48 e-volt phantom.
Ibhetri enkulu yeNP-F570, ukhetho lweBlackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip.
Kubandakanya iSitudiyo sokuSombulula iDaVinci epheleleyo yemveliso yeposi.
I-Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro iyafumaneka ngoku nge-US $ 2,495, ngaphandle kwemisebenzi yasekhaya kunye neerhafu, ezivela Blackmagic Design abathengisi emhlabeni jikelele.
Imifanekiso yemveliso yeBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, kunye nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso, ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design Pocket Cinema Ikhamera 6K Pro 2021-02-17
Previous: URuan Luong weRSP unceda ekulungiseleleni amagcisa eVFX exesha elizayo
next: Uyilo lweBlackmagic lubhengeza iNew Blackmagic Web Presenter HD